I-China Medical kuhlinzwa i-PE ephefumula ephefumulayo abenzi beteyipu nabaphakeli | EMUVA PHAMBILI
1. Usilika tape unezinzuzo zokuthamba nokunethezeka, ukunamathela okuhle esikhumbeni nokudabuka okulula;
2. Iteyipu ephefumulayo engalukanga (iphepha) inamandla amahle okuqina futhi akulula ukuyiphula;
3. Iteyipu ye-polyethylene (PE) enamabala, okulula ukudabula ngokulingana, ukudabuka kalula, ukudabula imigqa ngaphandle kokuhlanekezela;
Izinto Ukotini ongu-100%
Usayizi: 1.25 * 910cm
Yini i-Athletic tape?
Izinto eziyisisekelo zetheyiphu yokunamathela yizindwangu ezingezona ezelukiwe zezokwelapha, iphepha lezokwelapha, indwangu kakotini enwebeka, indwangu kakotini ocacile, indwangu kasilika, ifilimu ye-PE enefilimu kanye nefilimu le-OPP ngokulandelana lishaywe ngcina lokuncibilika okubucayi okunamathayo noma i-acrylic glue ehlanganisiwe. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukulungisa ama-catheters wokumnika noma izinaliti nokulungisa okokugqoka lapho ugqoka amanxeba. Ingasetshenziselwa ukulungisa ama-plaster ahlukahlukene.
4. Isinamatheliso esibucayi sezokwelapha se-acrylic esilungiselelwe ngokukhethekile sinamathela aqinile, ukunamathela okuhle kokuqala, ukubambelela nokubambelela okusindayo, akukho miphetho esontekile, akukho ukuxebuka, ukukhwezwa okulula nokushelelayo, futhi akukho ukudabuka kwesikhumba;
5. Ukucaciswa okuningi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemitholampilo.
Langaphambilini Isiguquli nebulizer nge-CE ISO ne-FDA
Olandelayo: INSULIN PEN NEEDLE